Samsung na-ekwupụta ọkwa Gear S3 Classic na LTE yana New Smartwatch Concepts | Gam akporosis
Samsung na-ekwuputa Gear S3 Classic na LTE n'akụkụ echiche smartwatch ọhụrụ
José Alfocea | | Noticias, smartwatch
Naanị ịmalite ụwa kasị ukwuu na jewelery ngosi, Baselworld 2017, emi ẹkenịmde ke obio Basel, Switzerland. Na South Korea Samsung agaala ebe ahụ iji gosipụta usoro ngwaahịa ọhụụ metụtara ngalaba a.
Otu n'ime ọkwa ọhụrụ a mara ọkwa, Uzo ozo nke Samsung Gear S3 Classic smartwatch iji bia na nkwado maka njikọ LTE, ihe na mbụ nlereanya kọrọ ma na pụrụ ịchọta na s · Frontier na oru na kpochapụwo.
"Gear S3 karịrị smartwatch"
Modeldị ọhụrụ Gear S3 Classic na LTE ga-adaba na ya American ụlọ ọrụ nkwukọrịta AT&T, T-Mobile na Verizon, nke ga-emecha kọwaa nkọwa gbasara ọnụ ahịa na nnweta. Mana nke a abughi naanị ihe ọhụụ nke nnukwu ụlọ ọrụ gam akporo gam akporo gosipụtara na ụwa.
«Anyị ghọtara na nche bụ karịa onye nlekọta oge, na ọ na-eje ozi ụdị onwe onye na ọdịmma ya. Na Gear S3 na-ewere ịdị mma, ịke na ihe ọhụrụ na ọkwa ọzọYounghee Lee, onye osote onye isi oche nke Global Marketing, Mobile Communications Business, Samsung Electronics kwuru, sị, "Gear S3 karịrị smartwatch, ọ bụ elekere mara mma nke na-etinye ntụgharị oge na ngalaba smartwatch, nke ejiri aka mee maka ndị nche elekere abụọ na ndị ọgbara ọhụrụ."
Samsung egosila ụfọdụ echiche ohuru ohuru na Baseworld 2017, tinyere ihe atụ nke Gear S3 emelitere ka ọ bụrụ 'mmeri na-emeri', otu ụdị nke S3, na elekere nke yiri Gear S3 mana ọ bụ n'ezie 'nche ọdịnala na usoro Switzerland na nkọwa ”, ludo Samsung
Ihe ndị a bụ ụfọdụ echiche nche ọhụụ Samsung na-egosi na mbipụta 2017 nke Baselworld, ngosipụta na ihe ịchọ mma kacha mma n'ụwa niile. N'ime ha ị nwere ike ịchọta ụdị "akpa elekere" nke Gear S3
Onye na-ese ihe elekere Switzerland bụ Yvan Arpa, onye ya na Samsung rụrụ ọrụ na mbụ Gear S3, abanyela na ụlọ ọrụ ahụ iji gosipụta echiche ọhụụ Samsung ọhụrụ na Baselworld 2017. Na mgbakwunye, ụlọ ọrụ South Korea na-egosipụtakwa ụfọdụ eriri okomoko ọhụrụ ihu nche ihu yana agba dị iche iche maka imecha Gear S3.
A ga-egosipụta eriri elekere ọhụụ ọhụụ, ụdị agba dị iche iche nke Gear S3 na atụmatụ echiche na-atọ ụtọ, na mgbakwunye na Gear smartwatch line na-elekwasị anya na Samsung ọhụrụ ulo oru Gear S3. N'ike mmụọ nsọ site na nka nke ịchekwa ihe, Gear S3 jikọtara nkọwa zuru oke na ihe nrụpụta adịchaghị adị dị na elekere ọdịnala yana ọhụụ teknụzụ nwere ọgụgụ isi chọrọ na smartwatch. Ejikọtara uru ndị ọrụ site na njiri mara dị mma, site na nguzogide mmiri na ngwangwa mmiri nke ọkwa agha, na onye okwu ewuru maka oku, ozi olu, na egwu egwu, yana GPS dị iche iji soro mmemme ọrụ. Ezubere Gear S3 iji kwado nchịkọta nchịkọta ọ bụla ma dabere na nche okomoko dị na Baselworld.
Samsung n'akụkụ njikọ Gear S3 yana njikọta LTE na echiche nche elele ndị ahụ egosiri n'elu, Samsung ewetalarị ọhụụ ọhụrụ nke eriri elekere na nke ahaziri iche na Switzerland.
Kedu ihe ị chere gbasara smartwatches ọhụrụ nke Samsung na-egosi na Baselworld 2017? Ekwesighi ịtọhapụ Gear S3 Classic na njikọ LTE dịka o mere na Frontier model ma ọ bụ dịka Google mere LG Watch Sport? You chere na ụdị Gear S3 ga-aba n’akpa uwe ga-aga nke ọma?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Samsung na-ekwuputa Gear S3 Classic na LTE n'akụkụ echiche smartwatch ọhụrụ
Blackview A9 Pro, igwefoto igwefoto ntinye abụọ